01 3683471, 01 3683424, 01 3683423
Myanmar Yi JIn Steel Structure Co.,Ltd. မှ တောင်ဥက္ကလာပ အထူးကုဆေးရုံကြီး သို့ Suction Machine (1လုံး) နှင့် PPE (50စုံ) အားသွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း။
Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး လှိုင်သာယာမြို့နယ် သို့ (Face Mask 1000 ခု, PPE ဝတ်စုံ 50စုံ, Shoe Cover 50စုံ) သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း။
Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး လှိုင်သာယာ သို့ Suction Machine (1-Set) , PPE ဝတ်စုံ (50စုံ), Mask (2000ခု), Section Pipe (50ခု) တို့အား ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း။
Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ လှိုင်သာယာမြို့နယ် (အနောက်ပိုင်း) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှုးရုံး သို့ Face Mask 100 ခု Hand Sanitizer 1000ml2ဗူး အားပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း။
Myanmar Yi JIn Steel Structure Co.,Ltd. မှ အပြင်ပဒံရပ်ကွက်အတွင်းရှိနေအိမ်အချို့အား ဆန်(၁ ပြည် + Face Mask ၅ ခုတစ်ထုပ်) အား 28.4.2020 နေ့တွင် လိုက်လံပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းပုံရိပ်များ။
Myanmnar Yi Jin Steel Structure Company ၏ Coronavirus COVID-19 အတွက် ကျန်းမာ‌‌ရေးအသိပညာ‌ပေး‌ဟော‌ပြောပွဲပြုလုပ်‌ခြင်း
Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ ၀န်ထမ်းမိသားစုများ တောင်ကြီး – အင်းလေး အပန်းဖြေ ခရီးစဥ်
Plot.(K3,K4) Corner of Sabal Street and Than Lwin Street, Myaytaing Block 20, Anawrahtar Industrial Zone , Hlaingtharyar Township , Yangon.
Phone:+95 13683423, +95 13686424 , + 95 13683471, +95 9797005398
Certificate of Incorporation Company Registration No.102200578
© 2021 Myanmar Yijin Steelstructure